Gabrummaa mataatti baatanii alagaaf daboo lolaa dhaabachuun fafa! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGabrummaa mataatti baatanii alagaaf daboo lolaa dhaabachuun fafa! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Seenaarraa hubachuun akkuma danda’amutti ilmaan Oromoo hedduun, jagnoonni onneedhaan hin waakkatamne, kan silaa utuu biyya ofii Oromiyaaf lolanii gabrummaatti xumura gochuu danda’an lola isaan hin ilaallanne seenanii lolanii jagnummaa seenaa keessatti kan galata hin qabne agarsiisaniiru. Kanaaf ammoo lolli Adawaa, lolli Baadimmee, lolli Itiyoo-Somaaliyaa fi kkf ragaa guddaadha. Utuu sabni isaanii Oromoo fi biyyi isaanii Oromiyaan hacuuccaafi roorroo alagaa jala jirtuu humna Oromoo gabroomsee Oromiyaa saame waliin lolanii kan hidda gabrummaa Oromoo irratti jabeessan lakkoofsaan himuun hin dandahamu. Kana kan kaasneef seenaa barsiisuuf utuu hin taane, gochi akkasii ammas deebi’ee mana Oromoo waan seeneef Dhaloonni qubee seenaa darbe irraa baratee kan har’a keessa jiru xiinxalee kan boruuf akka seenaa hojjetuuf.
Akkuma olitti tuquuf yaalle, lolli Impaayerri Itoophiyaa baroota darban yeroo adda addaatti geggeessaa turte hedduunsaa kan Oromoo hin ilaallanne ta’us, ilmaan Oromoo dirqamaniis ta’u fedhii isaaniitiin lolicha irraa qooda fudhatanii wareegama hin barbaachifne kaffalaniiru. Qaama Oromoo gabroomsee Oromiyaa dhuunfate waliin hiriiranii lolaa turuun ilmaan Oromoo seenaa keessatti seenaa gurraacha baay’ee nama jibbisiisudha.
Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf, yeroo Minilik Oromootti duulee Oromoo cabsu ilmaan Oromoo kanneen akka Goobanaa Daacceefaa Minilik waliin ta’uun Oromoo cabsanii gabrummaa jalatti kuffiisan. Yeroo Hayile Sillaaseen Oromootti duulee waraana Waaqoo Guutuufaa rukkutu ilmaan Oromoo kanneen akka Jaagamaa Keelloofaa Hayile Sillaasee tumsanii waraana Waaqoo rukkutaniiru. Amma seenaa kana irra deebi’uudhaan ilmaan Oromoo leellistoota sirna mootota darbanii waliin ta’uudhaan lola biyyattii keessatti geggeeffamaa jirurraa wayita qooda fudhatan argama kun immoo seenaa darbe barachuu dadhabuu fi ergamtuu Abbaa Irree tahanii tajaajiluudha
Poolisoonni maqaa Humna Addaa Oromiyaatiin ijaaraman lola Mootummaa Naannoo Amaaraafi Tigiraay gidduutti geggeeffamu irratti gama Mootummaa Naannoo Amaaraa hiriiranii qooda fudhachuuf bobba’uun isaanii seenaa qabsoo Oromoo fi waliigalatti seenaa cabiinsa Oromoo wallaaluu irraati jennee Nuyi Qeerroon Bilisummaa Oromoo amanna.
Lola biyya tokko keessatti geggeeffamu, kan naannoleen lamaan lafaafi ilaalcha siyaasaa irratti wal dhaban tumsuudhaaf lola ilma Oromoo kamiyyu hin ilaallanne irratti hirmaachuuf bobba’uun qaanii guddaa poolisoota Oromiyaa kanatti dhaga’amuu qabudha.
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo [OBN 06 01 2010] Dabni ummataa Somaalee Itiyoophiyaa fi Oromoo walitti…
Qaqqalii qeerroo bilisummaa Oromoo godinaa arsii
Qaqqalii qeerroo bilisummaa oromoo godinaa arsii magalaa #Darabbaa keessatti mootummaa faashistii pp'n dararamaa jiran keessa…
Sagalee Bilisummaa Oromoo Abiyyi Ahmad Oromoo ajjeesuu qofa osoo hin tahin nama sabboonummaa Oromoo ajjeesuuf…